I-Google ifuna ukuthi i-European Tourism ivuseleleke
Ikhaya » Izindaba Zamuva » Ezokuvakasha » I-Google ifuna ukuthi i-European Tourism ivuseleleke
Izindaba Ezintsha zaseYurophu • Izindaba Ezintsha • Izindaba Ezintsha Zokuhamba • Izindaba zikaHulumeni • Izindaba • Abantu • Unomthwalo wemfanelo • Ezokuvakasha • Inkulumo Yezokuvakasha • Izindaba Zocingo Lokuhamba • Izindaba Ezihlukahlukene
AbakwaGoogle bathi bayaziqhenya ngokujoyina i-European Tourism Commission.
Amapulatifomu weGoogle asiza umkhakha wezokuvakasha ukuxhumana nabahambi
Ukubambisana kuzosekela umsebenzi we-ETC ekusimeni, ukufakwa kwedijithali kwezokuvakasha kanye nokuxhumana
I-Google ne-ETC bazosebenzela ukuqinisa ukuncintisana komkhakha wezokuvakasha eYurophu
Siyaziqhenya ngokujoyina iKhomishini Yezokuvakasha yaseYurophu, sibheke phambili ekusebenzisaneni ngokubambisana ukuze sibambe iqhaza ekululameni komkhakha wezokuvakasha eYurophu. Isimo sezokuvakasha sishintsha ngokushesha, futhi sizibophezele ekuqhubekeni nokuhlinzeka ngamakhono edijithali, ukuqonda kwedatha, namathuluzi okusiza izinhlangano zezokuvakasha nezokuvakasha zikwazi ukuvumelanisa neminikelo yazo ukuhlangabezana nezidingo ezintsha zokuhamba. ” kusho u-Diego Ciulli, Umphathi Omkhulu Wezindaba zikahulumeni ne-Public Policy ku-Google.
I-Google ijoyine i-European Travel Commission (i-ETC) njengeLungu eliHlanganisene ukusiza ekuvuseleleni ukuvuselelwa komkhakha wezokuvakasha wase-Europe ngo-2021 nokuqinisa umkhakha njengenjini yokukhulisa umnotho, ukuqashwa kanye nokuthuthukiswa kwesifunda sabo bonke abantu baseYurophu.
I-ETC isebenze iminyaka ukukhulisa ukuthuthukiswa kwezokuvakasha okusimeme eYurophu, ikwazisa abantu ngezindawo ezingaziwa kakhulu zaseYurophu nokuqhakambisa izinzuzo zokuhlangenwe nakho kwasendaweni nokuhamba ngaphandle kwesikhathi sonyaka. Njengengxenye yenhloso yabo yokuba ngumthombo wolwazi othembekile, i-Google isiza umkhakha wezokuvakasha ngokusebenzisa imininingwane namathuluzi ezinhlangano zokumaketha lapho ziya khona (ama-DMO) ukufinyelela abavakashi abangaba khona phakathi nohambo lwabo lokuhlela uhambo. Isimemezelo samanje sobulungu sakha phezu kohlelo lwango-2017 lwe-Google DMO Partnerhip Programme olwethulwe e-Destinations International Conference Yonyaka ukukhuthaza nokuqeqesha ama-DMO ukuthi asebenzise imininingwane kanye nemininingwane ukuqonda ukuthi angayikhomba kanjani iminikelo yabo yokuhamba.
Isimemezelo samanje sobulungu be-Google sakha phezu kohlelo lwango-2017 lwe-Google DMO Partnership Programme olwethulwe e-Destinations International Conference Yonyaka ukukhuthaza nokuqeqesha ama-DMO ukuthi asebenzise imininingwane kanye nemininingwane ukuqonda ukuthi angayikhomba kanjani iminikelo yabo yokuhamba.
Ukusebenzisana kwe-Google-ETC kuzosiza ekwakheni amandla edijithali ezinhlangano zezokuvakasha eYurophu ngemicimbi yokuqeqeshwa eyenzelwe amalungu e-ETC, ibahlomisela ushintsho lwedijithali nobungoti bemakethe. Izophinde futhi iqondise izinqubomgomo nokuthatha izinqumo emkhakheni wezokuvakasha ngokusebenzisa ucwaningo ngokuhlanganyela kanye nemizamo yobuholi bokucabanga. Njengengxenye yomsebenzi wabo wokuxhasa umkhakha wezokuvakasha nezokuvakasha, iGoogle yethule uhlelo lwe-UNWTO neGoogle Tourism Acceleration Programukukhuthaza uguquko lwedijithali namakhono maqondana nokubuyiselwa komkhakha eYurophu. Ngokusebenzisana, i-ETC kanye ne-Google bazoshintshana ngemininingwane yokukhuthaza ukuhamba okusimeme, baqhube ukukhula kwezokuvakasha futhi banikeze umfutho wezomnotho eYurophu ngezinsizakalo zokumaketha ngokuhlanganyela, ama-webinar nemicimbi, kanye namaphrojekthi ocwaningo.
U-Eduardo Santander, uMqondisi oMkhulu we-European Travel Commission uthe: “Siyi-ETC sijabule kakhulu ukwamukela iGoogle njengeLungu elihlangene lenhlangano yethu ngesikhathi lapho indima yethu ekuqhakambiseni ezokuvakasha zase-Europe ibaluleke kakhulu kunakuqala. Isimemezelo esibalulekile emkhakheni wezokuvakasha waseYurophu, ubulungu beGoogle buzosivumela ukuthi sisebenzisane ngokubheka ekusaseni eliqhakazile, eliqinile lokuhamba eYurophu, ukuze kuzuze bonke abantu baseYurophu. Ukukhuthazwa kokukhula okusimeme emkhakheni wezokuvakasha wase-Europe kungumgogodla wecebo le-ETC futhi sikholelwa ukuthi ubulungu be-Google buzovumela zombili izinhlangano ukuthi zisebenze kangcono kule nhloso efanayo. ”